काण्डै काण्डले घेरिएका प्रम ओलीलाई न साखको मतलब, न पार्टीको चिन्ता,खोलो तर्नासाथ बिर्सिए लौरो !
Homeराष्ट्रिय खबरकाण्डै काण्डले घेरिएका प्रम ओलीलाई न साखको मतलब, न पार्टीको चिन्ता,खोलो तर्नासाथ बिर्सिए लौरो !
सुदर्शन आचार्य, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन् । चतुर्‍याइँकै कारण दुई पटक सत्तामा पुगेका उनले राजनीतिमा इमानदारिता, विधि, पद्धति, प्रचलित मूल्य–मान्यताहरुलाई भने पटक–पटक घोर उपेक्षा गरेको पाइन्छ ।
सरकारले यही कार्यशैली, सोच र बाटोलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा नेकपाको हविगत के होला भन्नेबारे पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई न आफ्नो साखको मतलव देखिन्छ, न त पार्टीको भविष्यको चिन्ता नै ।-रातोपाटी